MR MRT: ပုံမဲ့ကာတွန်း (၃၆)
ကာတွန်းလူ - ၁။ “မင်းသာ တကယ် အရည်အချင်း ရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံခြားမှ သွားစရာမလိုဘူး။ တစ်ပတ် သုံးရက်ပဲ အလုပ်ဆင်းရမယ်။ တစ်ရက် အလုပ်ချိန် . . . ပုံမှန်ပဲ။ ရှစ်နာရီ။ လစာက ဆယ်သိန်း။ အိုတီကြေး ရအုံးမယ်။ လုပ်မလား။”
ကာတွန်းလူ - ၂။ “တကယ်လား။ လုပ်မယ်။ ဘယ်မြို့မှာလဲ။ ဘာအရည်အချင်းတွေ လိုလဲ။ ဘာလုပ်ရမှာလဲ။”
ကာတွန်းလူ - ၁ ။ “မန္တလေးမှာ။ အရည်အချင်းက သိမ်မလိုဘူး။ ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ် တာဝန်ခံနိုင်ရင် ပြီးရော။ အလုပ်က ဓားပြတိုက်ရမှာ။”
Posted by Ashin Acara. at 2:34 AM